ဖြိုး အလ်ဝိုင်: Blog ရေးသားနည်း အခြေခံများ - ၄ (Blog အတွက် သိသင့်စရာများ)
Blog ရေးသားနည်း အခြေခံများ - ၄ (Blog အတွက် သိသင့်စရာများ)
တကယ်တော့ Blog တစ်ခုရေးတယ်ဆိုတာ မခက်ဘူး လို့ပြောလို့ရသလို လွယ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်စိတ်ပါဝင်စားပြီး လုပ်တဲ့သူတွေတောင် တစ်နေ့ကို Post တစ်ခု ပုံမှန်တင် နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော် ကြိုးစားရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ ....။
ဒီ Post မှာတော့ Blog နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝလေးတွေ ကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ Post မှာ ကျွန်တော်တို့ Post တစ်ခုကို ရေးပြီး Label တပ်တယ်၊ ပြီးတော့ Publish လုပ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ Blog ရေးသားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် Post တစ်ခုကိုလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ New Post ခေါ်မယ်။ ခေါင်းစဉ်ပေးမယ်။ စာကိုယ်မှာ ကိုယ်ရေးချင်တာတွေ ရေးမယ်။ သင့်တော်တဲ့ Label တပ်မယ်။ Publish လုပ်မယ်။ ဒီအတိုင်း ဆက်ရေးနေရုံပါ။
ဒါဆို ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်သေးလဲ? လို့ မေးစရာရှိမယ် ထင်ပါတယ် ....။ လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Blog ကို အလှဆင်တဲ့ အပိုင်းပါ။ အလှဆင်တယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Gadget တွေထည့်ခြင်း၊ Text Box ၊ Chat Box တွေထည့်ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံ Slideshow တွေထည့်ခြင်း၊ HTML Code တွေနဲ့ စာကြောင်းတွေထည့်ခြင်း စသည့်စသည့်များစွာသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို စိတ်ကြိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် .....။
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ Blog ကို အလှဆင်တာ မများစေဖို့ ပြောချင်ပါတယ် ....။ ကျွန်တော်တို့ အခုနေ ရေးလိုက်တဲ့ Blog အသစ်စက်စက်လေးဟာ Post တစ်ခုတည်းနဲ့ တကယ့်ကို အပြစ်အနာအဆာ ကင်းတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပါဘဲ ....။
အဲဒီ အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ Blog လေးကို ဖွင့်လိုက်ရင်လည်း ဘာမှ စောင့်စရာမလိုဘဲ ချက်ချင်းပွင့်လာတာကို တွေ့ကြရမှာပါ ....။
နောက်ပိုင်းမှာ Post တွေ အများကြီး ရေးကြရအုံးမှာပါ ....။ ဒီတော့ Blog က နည်းနည်းလေးလာပြီ ....။ (ဒီနေရာမှာ လေးတယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ Blog Loading Time ကြာတာကို ဆိုလိုတာပါ။ လွယ်လွယ် ပြောရရင် ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း မပွင့်ဘူးပေါ့ ....)
ဒီ Blog Loading Time ကြာခြင်းဟာ ကိုယ့် Blog ကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုတဲ့သူအတွက် အရမ်းအနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ် ....။ အားပေးချင်လို့ ဖွင့်ဖတ်ပါတယ် .... စောင့်လိုက်ရတာ တမေ့တမြော ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်ရှည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး .....။ ဒါ့ကြောင့် Blog ရေးသားသူအနေနဲ့ ကိုယ့် Blog ရဲ့ Loading Time မကြာစေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြရပါမယ် ....။
ဘာ့ကြောင့် Loading Time ကြာရတာလဲ ....?
သာမန် Post တွေရေးတင်ရုံနဲ့ Blog Loading Time ကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး ....။ Blog Loading Time ကိုကြာစေတဲ့ အချက်လေးတွေ ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ဆွေးနွေးပေးပါမယ် ....
Blog ရဲ့ Home Page လို့ခေါ်တဲ့ မူလစာမျက်နှာမှာ Post အရေအတွက် အများကြီးထားခြင်း။
ရေးလိုက်တဲ့ Post တွေမှာ ဓါတ်ပုံ၊ PDF file၊ Video ၊ Audio စတာတွေကို ပိုမိုထည့်သွင်းထားခြင်း။
Blog ရဲ့ Side Bar တွေမှာ Gadget, Widget တွေအများကြီး ထည့်သွင်းထားခြင်း။
Blog စာမျက်နှာတွင် Flash ကဲ့သို့ (ပုံအရှင်) တွေ၊ Effect တွေ အမြောက်အများ ထည့်သွင်းထားခြင်း။
စတာတွေကိုတော့ သတိထားဖို့ လိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်.....။ ဒီတော့
Blog ကိုပေါ့ပါးအောင် ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေ၊ အသံဖိုင်တွေ၊ Widget, Gadget တွေ ဘာမှ မထည့်ရတော့ ဘူးလား ....?
ဆိုပြီးမေးစရာ ဖြစ်လာပြန်ပါတယ် ....။ တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြရ မှာဖြစ်ပါတယ် ....။ Effect တွေထည့်တဲ့ နေရာမှာလည်း Code အနေနဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ Code တွေကို ရွေးပြီး သုံးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ....။
Blog Loading Time ကြာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Blog ကိုချည်းဘဲ အပြစ်ပြောလို့လည်း မရသေးပြန်ပါဘူး ...။
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Network Connection ကောင်း/မကောင်း
ကိုယ်သုံးတဲ့ Browser မှာ Flash player လို plug-in တွေကို Install လုပ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Computer ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Computer မှာ Virus ရှိ/မရှိ
စတဲ့ များစွာသော တစ်ခြားအကြောင်းအချက်များအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ် ......။
Blog တွေရဲ့ ပင်မနေရာဖြစ်တဲ့ Google Server ကိုယ်တိုင်က Error ရှိနေရင်လည်း Blog ကိုဖွင့်ချိန် ကြာမှာဖြစ်သလို Blog တစ်ခုကို နည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အတိုက်အခိုက် ခံရတဲ့ အချိန်မှာလည်း Blog က ဖွင့်မရလောက်အောင် နှေးကွေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ....။
Blog တစ်ခုအတွက် တစ်ခြားအရေးပါတဲ့ Dashboard အပိုင်းကိုတော့ နောက် Post မှာ ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်။